Tibor Nagy: "Cameroon waa ku xigta liistada ka dib Sudan kadib" - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Tibor Nagy: "Cameroon waa ku xigta liistada ka dambeysa Sudan kadib"
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Arrimaha Afrika, Tibor Nagy, ayaa sheegay in habeenkii ugu dambeeyay magaalada Houston intii lagu jiray shir saxaafadeed,in ka dib markii ay burburiyeen dadka reerka Omar El Bashir oo ku sugan Sudan, xaaladda nabadgelyo ee Cameroon ayaa noqon doonta xigtada xigta ee dawladda Mareykanka.
Danjirihii hore ee Maraykanka u fadhiya Guinea iyo Itoobiya ayaa ku dhawaaqay hadal ka soo yeeray saxaafadda Khamiista 11 April 2019 ee Houston, Maraykanka.
Sidii aan idhi, waxaan ka helnay warka wanaagsan ee Afrika. Sanadkii la soo dhaafay, fiiri waxa ka dhacaya Itoobiya, fiiri waxa ka socda Afrika guud ahaan; fiiri waxa ka dhacaya Angola. "
"More dhawaan, eegno waxa dhacaya ee DRC, taas oo ah markii ugu horeysay ee taariikhda, ma noqon kartaa jamhuuriyad dimuqraadi ah. Iyo laga yaabee dalka ugu qanisan dunida laga yaabaa in qaar ka mid ah maalkiisa dadkiisa u gaar ah la wadaago.
Diblomaasi ayaa sidoo kale ay soo jiidatay in wixii ka dhacay Sudan, isagoo dadkii ku afgembiyey taliskii musuqmaasuq Madaxweyne Omar al-Bashir hor gabagabada. "My walaac xigta waa Cameroon iyo aad ogtahay sida aan dareemo oo ku saabsan nacayb iyo colaad halkaas ka jirta"
Tibor Nagy ayaa sidoo kale ku sheegay hadalkiisa Houston in Afrika uu aad u hodan yahay laakiin xayiraadiisa ayaa ka dambeeya. kaliya ee gacanta ku leh awoodaha gumeysiga ama xukuumadda ee awoodda, laakiin maaha faa'iidada dadweynaha
Bayaankan ayaa la sameeyey iyadoo Dawlada Dhexe ay sidoo kale wax ka qabatay dhowr maalmood ka hor, iyada oo waydiisatay in Maraykanku uu qaado cunsurin deg deg ah oo ka dhan ah Dawladda Cameroon oo noqotaa mid dagaal badan oo rabshado u ah dadkeeda, sababtoo ah awood!
The ad'ailleurs Commonwealth sheegay, uu ogyahay meesha aad North West iyo South West, oo lagu qoslo doorashada oo ka dhacay Cameroon October ee la soo dhaafay. Tibor Nagy aslanba sheegay in "Ingiriisi waxaa muhiimad dagaal xuquuqdooda iyo xumaatay xaqiiqda ah in xoogga Yaounde lahaa" oo og ogol yahay ololiyo xaaladda "
Oo waxaad kaloo xusuusataan ii socon ayuu yiri on canal2 hawada, in Cameroon waa si dhab ah khalad, inuu rajeynayo inuu soo laabto in 2020 markii gobolka ku dhamaaday doonaa dhibaatada NW-SW oo heli xal baxo dhibaatada post -election maxaa yeelay "waa si rasmi ah murugo, laakiin sidoo kale shakhsi ahaan."
Maqaal uu qoray Yolande Tankeu, oo leh camer.be
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://lewouri.info/tibor-nagyle-cameroun-est-le-prochain-sur-la-liste-apres-le-soudan/
"Ma ahan mid u muuqan kara ama lama ogolaan karo CPDM in ay ku jirto xaalad aan sugnayn oo ku taala Yaoundé inta aan heysano kantaroolayaasha"